World News • Page 274 • Horseed Media
Inka Badan 45-Soomaali ah oo Ku Geeriyooday Xeebaha dalka Mozambique
February 16, 2011 - By: Abdirahman. A
Wararka ka imaanaya xeebaha dalka Mozambique ayaa sheegaaya in halkaas ku degtay dooni siday muwaadinin u dhashey waddamada Soomaaliya iyo Itoobiya. Muwaadininta Soomaaliyeed ee lasocday doonidaas »
Taariikh Kooban: Xusni Mubarak Madaxweynihii Hore ee Dalka Masar
February 11, 2011 - By: Hanad Askar
1928 Muabarak waxa uu ku dhashey Tuulo yar oo ku dhaw Qaahira isla markaana saaran webiga Niil-ka. 1949 Waxa uu kamid noqdey ciidanka cirka ee dalka Masar isaga oo noqdey duuliye diyaaradaha »
Xusni Mubarak oo Xilkii Iska Casiley
Madaxweynihii dalka Masar Xusni Mubarak ayaa ayaa go'aansadey in uu xilka isaga dego, kadib markii uu cadaadis xooggan kala kulmey shacabka dalka Masar. War kooban oo uu ka akhriyey telefishanka »
Mubaarak Xilka Iskama Casilin Waxaana uu Wareejiyey Qayb Kamid ah Awoodiisi
Waxaa caawa adduunka intiisa badan laga daawanaayey khudbadii Madaxweynaha Dalka Masar Xusni Mubarak, khudbaddaas o markii hore meelkasta la mariyey in uu iska casilaayo xilka. Madaxweynaha ayaa »
Xusni Muabar oo Xilka Dalka Masar Iska Casilaaya
Madaxweynaha Dalka Masar Maxamed Xusni Mubarak ayaa habeenimada Khamiista ah oo ku beegan caawa ka degaaya xilkiisa, kadib markii dalka masar laga oogey Mudaaharaadyo xooggan oo ka dhan ah Xukunkiisa »